Lahatsoratra nataon'i Halley Johnson momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Halley Johnson
Halley Johnson dia mpanoratra mpanoratra rindrambaiko tsy miankina. Iza no miasa ankehitriny Earlylightmedia.com. Manana sombin-tsoratra vitsivitsy navoaka tamin'ny solon'anarana izy. Tononkalo ambany kokoa no ankamaroan'izy ireo. Mandritra ny fotoana hanoratany ny tantaram-piainany voalohany i Halley (ho eo amin'ny tena anarany izy io). Ny zava-bitany lehibe indrindra dia ny fananana renim-pianakaviana tsara ho an'ny kisoa ary zanaka vavy antonony ho an'ny ray aman-dreniny.
Torohevitra fanovana horonantsary 5 ho an'ny mpivarotra
Alahady 9 Febroary 2020 Alahady 9 Febroary 2020 Halley Johnson
Ny varotra horonan-tsary dia nanjary iray amin'ireo fomba lehibe indrindra amin'ny tsena tao anatin'ny folo taona lasa. Mihena ny vidin'ny fitaovana sy ny programa fanovana satria lasa be mpampiasa kokoa izy ireo, ary nahazoany takany be koa izany. Ny famokarana horonantsary dia mety ho sarotra raha mahitsy amin'ny fotoana voalohany andramanao azy. Ny fitadiavana ny fomba mety hametrahana horonan-tsary ho an'ny marketing dia sarotra kokoa noho ny fanovana mahazatra. Tsy maintsy apetrakao